rastriyapema – Page 882 – Rastriyapatrika
जागिर खान जाँदा, यसरी लुटियो मेरो जवानी
rastriyapema | November 18, 2017 | No Comments
बुवाको निधनले मलाई पारिवारिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता यसअर्थ आएको थियो कि मेरी दिदीको बिहे भइसकेको थियो र म नै ममीपछिको घरमुली थिएँ । मेरा दुइ भाइ र दुइ बहिनीको तुलनामा घरको भार बोक्न मलाई नै योग्य तुल्याएको थियो मेरो उमेरले । म १७ बर्षको भइसकेकी थिएँ । यौवनको रङ, रुपले मलाई छोपिसकेको थियो । […]
खोलाले बगाउँदै गर्दा आमाले इशारा गरेकी थिइन्, ‘बाबु तँ जा!’
दमक : झापाका गाउँपालिका– २ का १७ वर्षीय राजकुमार घोर्साने गत शुक्रबार आमा र बहिनीसँग बसेर राति अबेरसम्म टीभी हेरे। त्यतिखेरसम्म उनले अाभाषासम्म पाएका थिएनन्, आमा घनमाया र बहिनी १५ वर्षीया कमलासँगै बस्ने उनको अन्तिम दिन हो। उनीहरू राति १० बजेतिर सुते। मध्यरातमा राजकुमारलाई पिसाबले बेस्मारी च्याप्यो। बिउँझिदै गर्दा उनले पाए, अोछ्यान त छपक्कै भिजिसकेको रहेछ। छानामा हेरे। […]
दमित यौनकुण्ठाको समाधान बन्दै ‘सेक्स टोय’
काठमाण्डौ । ‘तिमी यहि बस्दै गर’ मोटरसाइकलमा खिचापोखरी पुगेका एक जोडि युवायुवतीमध्ये युवकले आफुसँगै आएकी युवतीलाई बाहिर कुराएर कन्डम हाउस भित्र छिरे । केही मिनेट कन्डम हाउसको सोरुममा कुराकानी गरेर बाहिर निस्कीए र ईसाराले ति युवतीलाई बोलाए । अफ्ठ्यारो मान्दै ति महिलापनि भित्र पसिन । ग्राहकले भनेजस्तो सेक्सटोय ल्याइदिएपछि केही समय सेल्सम्यानसँग कुराकानी गरे । […]
पहिलो पटक नेपाल ग्लोबन बोर्डमा निर्वाचित
नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ (आइसीए) को ग्लोबल बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । मलेसियाको क्वालालमपुरमा १४ देखि १७ नोभेम्बरसम्म भएको ग्लोबल कङ्ग्रेस तथा आइसीएको साधारण सभाबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल १५ सदस्यीय ग्लोबल बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल सन् १९९७ देखि आइसीएको सदस्य भएको भए पनि पहिलो पटक ग्लोबल […]
बस ड्राइभरसँग रमाइलो गर्दा जन्मेको शिशुलाई ४ दिनपछी जिउदै बागमतीको फोहोरमा फालेपछी…
बच्चा जन्माएर बागमती नदीमा फाल्ने महिलाको नयाँ खुलासा भएको छ । ती महिलाले जन्माएको चार दिनमै नाबालक शिशुलाईविहीबार बागमतीमा फालेकी थिईन् । स्थानीयले देखेपछि उनलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । कसरी जन्मियो बच्चा ? बागमतीमा बच्चा फल्ने महिलाको नाम हो कान्छीमाया तामाङ । उमेर भयो २२ बर्ष । घर काभ्रे गोकुले–५ मा पर्छ । […]
किन सरकारले देख्दैनन पानीमा डुब्दै त्रिशूली पार गर्ने यि विद्यार्थीहरूको पिडा (भिडियो)
rastriyapema | November 17, 2017 | No Comments
नेपालको राजनितिमा विभिन्न परिवर्तनहरु भएता पनि नेपालको जनताको जनजिबनमा परिवर्तन कहिले अाउने ? किन सरकारले देख्दैनन यि भविष्यको करणाधार विद्यार्थीहरूको पढ्ने ईच्छा? विचराहरू एउटा टायरमा सुतेर पानीमा डुब्दै त्रिशूली पार गरेको हामीले देखिरहेको छौँ तर यस्तो दुखपिडा देख्दा पनि सरकार मौन छ,चुनावी प्रचार र जन्तालाई भुल्याईरहने काम गरिरहेका छन नेताहरू! यसरी देश कहिले विकास होला? […]
गौचनको हत्यामा संलग्न थप दुई पक्राउ, दुई पेस्तोल र १० राउन्ड गोली बरामद
प्रहरीले गौचनको हत्या अभियोगमा शुक्रबार बसन्त थेवे र धनराज योङहाङलाई पक्रेको हो । दुवैलाई कपनबाट पक्रेको गौचन हत्या अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरेका डीआइजी गणेश केसीले जानकारी दिए । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट दुईओटा पेस्तोल र १० राउन्ड गोली पनि बरामद भएको छ । यसअघि, बिहीबारमात्र प्रहरीले गौचनको हत्यामा संलग्न ‘सुटर’सहित ५ जनालाई सार्वजनिक गरेको थियो । […]
अर्को जन्ममा पनि तेस्रोलिंंगी नै हुन पाउँ :तेस्रोलिंंगी भूमिका (भिडियोमा)
भूमिका श्रेष्ठ, तेस्रो लिंगी समूहको अधिकारका लागि करिब एक दशक अघिदेखि क्रियाशील छन् । तर उनको व्यस्तता मोड्लिंग क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । नेपाली चलचित्र कान्छीको भर्खरै सुटिंग सकेकी उनी निक्कै उत्साहित पनि छिन् । समाजले छिःछिः र दूरःदूरः गरेको लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार स्थापित गर्न आवाज उठाउँदै आएकी उनी चलचित्रमा पनि तेस्रो लिंगीकै भूमिकामा देखिदैछिन् […]
आइफोन ‘टेन’को नेपाली मूल्य कति? थाहा पाउनुहोस
यस वर्षकै बहुप्रतिक्षित आइफोन टेनको नेपाली मूल्य तय भएको छ। आधिकारिक विक्रेता ओलिज स्टोरका निर्देशक लोकेस ओलीले दिएको जानकारी अनुसार आइफोन टेन ६४ जिबी भेरियन्टको मूल्य १ लाख ३८ हजार तथा २५६ जिबी भेरियन्टको १ लाख ५९ हजार निर्धारण गरिएको छ। केही समयपछि नेपाली बजारमा आउने भए पनि प्रिबुकिङ भने खुल्ला भइसकेको छ। यसैबीच आइफोन […]
बनेपा अपडेट: स्थानीयहरुकोे आक्रोसित भिडलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिंदै
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–७ चारदोबाटोस्थित तरकारी बजारमा शुक्रबार दिउँसो टिपरको ठक्करले दिएर मोटरसाईकल चालकलाई गम्भिर घाईते बनाएपछि आक्रोसित बनेका स्थानीयहरुकोे भिडलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिंदै। हिजो विहीबार बिहान छ बजे बनेपास्थित बुडोलडाँडामा टिपरको ठक्करले एक जना बृद्धको ज्यान गएको थियो । तस्वीरः पेमा लामा, रासस, काभ्रेपलाञ्चोक
« Previous 1 … 880 881 882 883 884 … 888 Next »
मन्त्री बिना मगर अस्पताल भर्ना, ससुरा प्रचण्ड भेट्न पुगे अस्पताल
आजको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल भाद्र २८ गते । शनिवार
पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइकाे बयान बाझियाे
डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ !
सुगर बिरामीले यो खान खानु हुन्छ त्यो हुदैन भन्दै छुट्याईन्छ, तर त्यो गलत हो